Nezvedu - Ningbo Madacus Printing Co., Ltd.
Ningbo Madacus Printing Co., Ltd. inopa kukwikwidzana kudhinda uye kupakata masevhisi kweanopfuura makore makumi maviri, isu tinotarisana nekudhinda mabhuku, magazini, zvinyorwa uye mabhokisi ekupakira, neakanyanya kuzvida, takagara tichisangana uye kunyange kudarika zvinodikanwa nevatengi.
Yepamberi michina yekugadzira mitsara, Maitiro akaomarara eQC, Yemahara inoonekwa Kugadzirwa
Isu tinonamatira kune bhizinesi uzivi hwe "budiriro-inotungamirwa budiriro" uye parizvino tine zvakakwana zvemazuva ano zvigadzirwa zvekugadzira uye zvivakwa zvinotsigira. Isu tinonyanya kuzivisa Heidelberg XL75-8F nyowani, XL75-6 + LF quarto 6 + 1 Printing Press, super Master CD102-4Preset Plus, Xiaosen G40-5 color pair boot yakazara mana anodhinda michina. Kubva pane dhizaini, kugadzira ndiro, kudhinda, bronzing, lamination, kufa kucheka, bhuku remanyorerwo gadziriro imwe-yekumira yekugadzira.
Kutarisana neinogara ichichinja nguva yesainzi uye tekinoroji kusimudzira, ichiri kuunza epamberi michina uye tekinoroji, kambani yedu yakaunza yepamusoro manejimendi manejimendi uye nyanzvi uye hunyanzvi vashandi, zvichibva kuShanghai, yakatarisana nenyika, ichishingaira kuwedzera iyo yepasi rese, yekumba musika unowana kukunda-kuhwina mamiriro nevatengi vane yakanyanya kunaka mhando, yakanakisa sevhisi uye mutengo wakanakisa. Kuzvitsaurira uye hunyanzvi ibhiriji pakati pedu nevatengi vedu!
Tichapa chipo chedu panguva yekutanga, kuendesa nenguva, mhando yakanaka, mutengo wekukwikwidza ndiyo pfungwa yedu yebasa. Tinotarisira kuve neyenguva-refu bhizinesi pamwe chete nemutengi kubva pasirese, Ndapota sununguka kuti utaure nesu kuti uwane rumwe ruzivo.